९० अर्ब सकियो, पुनर्निर्माणमा प्रगति १० प्रतिशत मात्र | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← टीकापुर हत्याकाण्ड: रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो
राष्ट्रियसभा विवाद : एकल संक्रमणीयमा सहमतिको संकेत →
९० अर्ब सकियो, पुनर्निर्माणमा प्रगति १० प्रतिशत मात्र
Posted on 25/12/2017 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
‘निर्धारित अवधिमा ७० प्रतिशत काम सकिए पनि उपलब्धि’
१० पुस, काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सरकारले गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । तर, पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । हालसम्म भूकम्पले भत्काएका १० प्रतिशत घर मात्र तयार भएका छन् । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट सात लाख ६७ हजार सात सय पाँच वटा निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार क्षतिग्रस्त ती घरमध्ये हालसम्म ७९ हजार चार सय ४२ को निर्माण सकिएको छ ।
यसबीचमा लामो समयदेखिको विवादका कारण महत्वपूर्ण मानिएका काठमाडौंको रानीपोखरी पुनर्निर्माण’bout अझै टुंगो लागिसकेको छैन । लामो रस्साकस्सीपछि धरहरा प्राधिकरणले नै बनाउने भएको छ ।
विश्व बैंकले आठ अर्ब ७९ करोड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले तीन अर्ब ७० करोड र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चार अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । भारतले एक अर्ब १८ करोड र चीनले ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, यसबीचमा ।
सीईओ भन्छन्- पुनर्निर्माण सन्तोषजनक
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल हालसम्म पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजक रहेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रोजस्तै परिस्थिति भोगेका विश्वका विभिन्न मुलुकको अवस्था नियाल्दा पनि नेपालको पुनर्निर्माणको गति सन्तोषजनक छ,’ उनी भन्छन् ।
आगामी असारसम्ममा ६० प्रतिशत पीडितलाई छानोको व्यवस्था गर्ने सीईओ भुसाल बताउँछन् । ‘अहिले नै पनि ८० हजार घर बनिसकेका छन्, एक लाख ९४ हजार घर निर्माणाधीन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले दैनिक दुई हजार हाराहारीमा घर बनिरहेका छन्, यो हेर्दा आगामी असारसम्ममा हामीले किटान गरेको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।’
आगामी एक महिनाभित्रैमा करिब ३६ हजार सिकर्मी/डकर्मी तयार हुने र त्यसपछि पुनर्निर्माणको कामले गति पाउने उनको भनाइ छ । काममा अनुपस्थित हुन थालेपछि पछिल्लो समय प्राविधिकहरुलाई स्थानीय सरकार मातहतमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार पनि पुनर्निर्माणमा सहभागी हुने भएपछि कामको गति अरु बढ्ने प्राधिकरणको आशा देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुनर्निर्माणमा आर्थिक समस्या हुने देखिएको छ । यसका लागि पुनः अर्को दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक दाउपेचको शिकार
गठन हुनु अघिदेखि नै तीव्र राजनीतिकरणको शिकार भएको प्राधिकरण त्यसयता पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन सकेन । यही राजनीतिक दाउपेचका कारण भूकम्प गएको नौ महिनापछि मात्रै सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।
सरकार फेरिएपिच्छे दलीय चाहनामा नेतृत्व परिवर्तन हुनुले पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
१० पुस ०७२ मा प्राधिकरण गठन भएयता मात्रै तीन जनाले नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । यसबीचमा प्राधिकरणका पहिलो सीईओ सुशील ज्ञवाली सरकार परिवर्तन भएपछि बर्खास्तीमा परे । २७ पुस ०७३ मा सरकारले डा. गोविन्दराज पोखरेललाई उनको ठाउँमा नियुक्त गर्‍यो । डा. पोखरेल पनि नौ महिनामै प्राधिकरणको नेतृत्व छाडेर प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्न गए ।
गत ६ कात्तिकमा हालका सीईओ भुसाललाई जिम्मेवारी दिइयो । चुनावपछि सरकार परिवर्तन हुने भएसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व पनि फेरिने चर्चा शुरु भइसकेको छ ।
सरकारले प्राधिकरणको अवधि पाँच वर्षका लागि तोकेको छ । यसबाहेक एक वर्ष समय थप्न सकिने व्यवस्था छ । सबै गरेर प्राधिकरणको अवधि ६ वर्ष रहनेछ । तर, दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका घर र अन्य संरचना हेर्दा प्राधिकरणले आफ्नो लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने जानाकारहरुको ठम्याइ छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने निर्धारित समयमा करिब ७० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिए पनि उपलब्धिमुलक हुने बताउँछन् ।